Waa Maxay Saameynta Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada? | Martech Zone
Waa maxay suuqgeynta warbaahinta bulshada? Waan ogahay inay u egtahay su'aal aasaasi ah, laakiin runtii waxay u qalantaa dood. Waxaa jira cabirro dhowr ah oo ku saabsan istiraatiijiyad suuq geynta warbaahinta bulshada oo weyn iyo sidoo kale xiriirkeeda isku xiran ee istiraatiijiyadaha kale ee kanaalka sida waxyaabaha, raadinta, emaylka iyo moobiilka.
Aynu dib ugu noqono qeexitaanka suuqgeynta. Suuqgeyntu waa ficilka ama ganacsiga baaritaanka, qorshaynta, fulinta, kor u qaadida iyo iibinta alaabada ama adeegyada. Warbaahinta bulshada waa warbaahin isgaarsiineed oo u sahlaysa dadka isticmaala inay abuuraan waxyaabo, wadaagaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin ama ka qayb qaataan isku xirka bulshada. Warbaahinta bulshada sida dhexdhexaadka ahi aad ayey uga duwan tahay warbaahinta soo jireenka ah laba sababood awgood. Ugu horreyn, waxqabadku waa mid guud ahaan oo ay heli karaan suuqleyda si ay cilmi baaris ugu sameeyaan. Marka labaad, dhexdhexaadku wuxuu u oggolaanayaa isgaarsiinta laba-geesoodka ah - mid toos ah iyo mid aan toos ahayn.
Waxaa jira 3.78 bilyan oo isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada adduunka oo dhan tiradanna waxay sii socon doontaa oo keliya sii kordheysa sannadaha soo socda. Sida ay hadda tahay, taasi waxay u dhigantaa ilaa 48 boqolkiiba tirada dadka adduunka.
Waa maxay Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada?
Istaraatiijiyad suuqgeynta warbaahinta bulshada oo xooggan waa inay ku dartaa sifooyinka kala duwan ee warbaahinta bulshada iyo sidoo kale inay xoojiso hababka astaanta loola socon karo oo kor loogu qaadi karo. Taas macnaheedu waa in lahaanshaha istiraatiijiyad lagu riixo 2 tweets maalintii ma aha istiraatiijiyad warbaahinta bulshada oo dhammaystiran. Istaraatiijiyad dhammaystiran waxay ku jirtaa qalab iyo habab si:
Cilmi-Market - Uruurinta macluumaadka si aad sifiican cilmi baaris ugu sameyso una fahamto ulana xiriirto dhageystayaashaada.
Dhageysiga Bulshada - La socodka iyo ka jawaab celinta codsiyada tooska ah ee dhagaystayaashaada, oo ay ku jiraan adeegga macaamiisha ama codsiyada iibka.
Maareeyaha Guud - Dhawridda iyo hagaajinta sumcaddaada shakhsiyadeed ama summaddeed, oo ay ku jiraan kormeerka dib-u-eegista, ururinta, iyo daabacaadda.
Daabacaadda Bulshada - qorsheynta, jadwalka, iyo daabacaadda waxyaabaha bixiya wacyi-gelinta iyo qiimaha macaamiishaada mustaqbalka, oo ay ku jiraan sida loo sameeyo, markhaatiyada, hoggaaminta fikirka, dib u eegista wax soo saarka, wararka, iyo xitaa madaddaalada.
Networking Bulshada - si firfircoon uga qayb qaadashada istiraatiijiyado kor u qaadaya gaadhitaankaaga saamileyaasha, rajooyinka, macaamiisha, iyo shaqaalaha.
Horumarinta Bulshada - Xeelado dhiirrigelin ah oo keena natiijooyinka ganacsiga, oo ay ku jiraan xayeysiinta, dalabyada, iyo u-doodista. Tani waxay u fidin kartaa helitaanka iyo shaqaalaynta saamileyaasha si ay ugu fidiso dallacsiintaada shabakadahooda.
Natiijooyinka meheraddu had iyo jeer ma aha inay noqdaan iibsiga dhabta ah, laakiin waxay noqon karaan dhisidda wacyiga, kalsoonida, iyo maamulka. Dhab ahaantii, warbaahinta bulshada mararka qaarkood ma aha dhexdhexaad dhexdhexaad ah si loo wado iibsiyada tooska ah.
73% suuqleyda ayaa rumeysan in dadaalkooda ay ku bixinayaan suuqgeynta warbaahinta bulshada ay xoogaa wax ku ool u ahaayeen ama wax ku ool u ahaayeen ganacsigooda.
Baraha bulshada ayaa inta badan loo adeegsadaa in lagu ogaado afka, afka doodda cilmi baarista, iyo isha lagu xiro - iyada oo loo marayo dad - shirkad. Sababtoo ah waa laba-jiho, aad bay uga duwan tahay kanaalada suuqgeynta kale.
71% macaamiisha khibradda wanaagsan u leh sumadda baraha bulshada waxay u badan tahay inay astaanta kula taliyaan asxaabtooda iyo qoyskooda.
View Martech ZoneXogta Tirakoobka Warbaahinta Bulshada
Dhexdhexaadinta Warbaahinta Bulshada iyo Tusaalooyinka la Adeegsado
54% dadka isticmaala baraha bulshada waxay u adeegsadaan warbaahinta bulshada wax soo saarka.
Cilmi-Market -Waxaan la shaqeynayaa soo-saaraha dharka oo hadda ka bilaabaya astaanta tooska ah ee macaamilka internetka. Waxaan u adeegsaneynaa dhegeysiga bulshada si aan u aqoonsanno ereyada muhiimka ah ee bartilmaameedsada macaamiisha adeegsada markay ka hadlayaan tartamayaasha ugu sarreeya si aan ugu dari karno ereyadaas dadaallada summaddeena.
Dhageysiga Bulshada - Waxaan hayaa digniinno loo sameeyay astaanteyda gaarka ah iyo boggan si aan u arko tixraacyadayda khadka tooska ah isla markaana aan si toos ah uga jawaabi karo. Ma aha in qof kastaa ku sumadeeyo sumad qoraal, sidaa darteed dhagaysigu waa muhiim.
Maareeyaha Guud - Waxaan hayaa laba magac oo maxalli ah oo aan la shaqeynayo oo aan u samaynay codsiyada dib -u -eegista otomaatiga ah macaamiishooda. Dib -u -eegid kasta waa la uruuriyaa oo laga jawaabaa, macaamiisha faraxsanna waxaa lagu riixaa inay internetka ku wadaagaan faallooyinkooda. Tani waxay horseeday in la kordhiyo aragga natiijooyinka raadinta maxalliga ah.
Daabacaadda Bulshada - Waxaan la shaqeeyaa dhowr shirkadood oo maareeya jadwalka taariikhda isla markaana meel marinaya dadaalkooda jadwalka Agorapulse (Waxaan ahay safiir). Tani waxay u badbaadinaysaa waqti aad u badan maxaa yeelay maahan inay baxaan oo si toos ah u maamulaan dhexdhexaad kasta. Waan ku darnay Ololaha tagging UTM si aan u aragno sida baraha bulshada ay u wadaan taraafikada iyo isu beddelka ku soo noqoshada boggooda.
Networking Bulshada - Waxaan si firfircoon u isticmaalayaa madal iga caawisa inaan garto oo aan la xiriiro saamileyaasha iyo ururada iga shaqaaleysiin kara LinkedIn. Waxay saamayn weyn ku yeelatay fursadaha hadalkayga waxayna iga caawisay shirkadayda inay koraan iibkeeda.
Horumarinta Bulshada - Qaar badan oo ka mid ah macaamiishayda waxay ku daraan xayeysiinta warbaahinta bulshada markay kor u qaadayaan dhacdooyinka, websaydhka, ama iibka. Bartilmaameedka cajiibka ah ee barnaamijyadan xayeysiinta ah ayaa si aad ah waxtar u leh.
Waxaan garwaaqsaday inaad dhisi karto ololeyaal warbaahinta bulshada dhexdeeda ah oo si caddaalad ah u adag oo ku daraya adeegsiga iyo dhexdhexaadin siyaabo aan u dhigmin xulashooyinka aan kor ku xusay. Kaliya waxaan tuurayaa qaar ka mid ah isticmaalka guud ee mid kasta oo ka mid ah warbaahinta si aan u siiyo xoogaa aragti ah oo ku saabsan sida loogu adeegsan karo si ka duwan.
Qaar badan oo suuqleyda ah waxay u janjeeraan dhinaca dhexdhexaadka ah ama midka ay ku qanacsan yihiin. Tani waa shil sugaya in ay dhacdo maxaa yeelay ma aysan ka faa'iideysanin ama isku darin dhexdhexaadiyeyaasha si ay u buuxiyaan awooddooda.
Sidee Ganacsatadu u Isticmaalaan Baraha Bulshada
Soo bandhig astaantaada - ereyga afku waa mid si wax ku ool ah waxtar u leh maxaa yeelay aad buu ugu habboon yahay. Dadka ku jira warshad gaar ah, tusaale ahaan, inta badan waxay isugu yimaadaan kanaallada warbaahinta bulshada iyo kooxaha. Haddii hal qof wadaago astaantaada, wax soo saarkaaga ama adeeggaaga, waxaa arki kara lana wadaagi kara dhagaystayaal aad ugu hawlan.
Horumar bulsho daacad ah - haddii aad leedahay istiraatiijiyad bulsheed oo wax ku ool ah oo qiimo u siineysa dhagaystayaashaada - ha ahaato caawimaad toos ah, waxyaabo kooban, ama warar kale, talooyin iyo tabaha, bulshadaadu way kori doontaa si ay kuugu qadarto oo ay kuu aaminto. Aaminaad iyo hay'ad waa cunsur muhiim u ah go'aan kasta oo iibsi.
Hagaajinta adeegga macaamiisha - marka macmiilkaagu kuu soo waco caawimaad, waa wadahadal 1: 1 ah. Laakiin markii macaamilku gaaro warbaahinta bulshada, dhagaystayaashaadu waxay arkayaan sida aad uga falceliso ugana jawaabto baahidooda. Adeeg weyn oo macaamiil ah ayaa laga soo sheegi karaa gees kasta oo adduunka ah… sidoo kale musiibo adeegga macaamiisha ayaa dhici karta.
Kordhi gaadhista dhijitaalka ah - maxay tahay sababta wax soo saarkeedu u leeyahay istiraatiijiyad la'aan wadaagis iyo kor u qaadis? Sameynta waxyaabaha macnaheedu maahan hadaad dhisto way imaan doonaan. Ma yeeli doonaan. Marka in la dhiso shabakad bulsheed oo weyn oo ay bulshadu ku noqoto u doodayaal magac ayaa si aan caadi aheyn u awood badan.
Kordhi taraafikada iyo SEO - In kasta oo mashiinnada raadinta ay sii wadaan inay ka saaraan iskuxirayaasha, taageerayaasha iyo kuwa raacsan inay yihiin toos toos ugu ah darajada mashiinka raadinta, shaki kuma jiro in xoog istaraatiijiyada warbaahinta bulshada ayaa wadi doonta natiijooyinka mashiinka raadinta weyn.
Kordhi iibka oo gaadho dhagaystayaasha cusub - waa la caddeeyay taas dadka iibiya ee ku daraya istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada kuwa aan samayn. Sidoo kale, dadkaaga iibka ahi waxay fahmeen sida loola macaamilo jawaab celinta taban ee nidaamka iibka maxaa yeelay dhab ahaantii waxay la hadlaan dadka maalin kasta. Qeybtaada suuqgeynta badanaa ma sameyso. Ku dhejinta wakiilladaada iibka bulshada dhexdeeda si aad u dhisto joogitaan waa hab cabsi leh oo lagu ballaariyo gaadhistaada.
Iska yaree qarashka suuq geynta - halka ay u baahan tahay xawaare, koritaanka ku soo kordha baraha bulshada wixii soo socda, saamiyada, iyo qasabno ayaa ugu dambeyntii hoos u dhigi doona kharashyada iyadoo la kordhinayo baahida. Waxaa jira sheekooyin aan caadi aheyn oo shirkadaha ka socda jabinta ilaa ballaarinta kadib markii ay dhisteen joogitaanka warbaahinta bulshada ee gaarka ah. Taasi waxay u baahan tahay istiraatiijiyad ka hor imaan karta dhaqammo badan oo shirkadeed. Waxa kale oo jira shirkado badan oo cabsi badan ku haya baraha bulshada oo si fudud waqtiga uga lumiya.
49% macaamiisha ayaa ku andacoonaya inay ku tiirsan yihiin talooyinka saamaynta ku leh warbaahinta bulshada si ay ugu wargeliyaan go’aanka ay iibsanayaan.
Mid kasta oo ka mid ah kuwan ayaa ah habka loo kordhiyo helitaanka iyo haysashada macaamiishaada iyo sidoo kale in xitaa laga xumaado safarkooda macaamiisha.
Saameynta Baraha Bulshada
In kasta oo aanan had iyo jeer ku riixin macaamiishayda inay si buuxda u maal gashadaan hab kasta oo warbaahinta bulshada ah, haddana waxaan arkaa soo noqnoqoshada sii socota ee maalgashiga marka macaamiishaydu maamulaan sumcadooda oo ay qiime la dhisaan kuwa raacsan ee internetka ah. Si kastaba xaalku ha ahaadee, iska indho -tiridda awoodda warbaahinta bulshada waxay ku jiri kartaa halis astaan ​​haddii ay si xun u maamulaan arrinta adeegga macmiilka. Macaamiishaadu waxay kaa filayaan inaad goob joog ahaato oo aad si habboon uga jawaabto aaladaha warbaahinta bulshada ee muhiimka ah… ku darista aaladaha iyo istaraatiijiyadaha lagu sameeyo tan waa lama huraan.
Tags: FacebookSuuq geynta Facebooksuuqgeynta ku xirancilmi baarissumcadda internetkaPinterestsumcadmaaraynta sumcadReviewsdhageysiga bulshadaxayaysiinta warbaahinta bulshadaujeedada warbaahinta bulshadaMedia Social Suuqdhiirrigelinta warbaahinta bulshadasumcadda baraha bulshadaxiriirka bulshadakobcinta bulshadadaabacaadda bulshadaTikToksuuqgeynta youtube
Inbadan waan heshiin kari waayey, waxaan noqdaa kan xaflada isku dayaya inaan shaqadeyda fiidiyowga u bandhigo fannaaniinta! Iyo xitaa haddii ay xiiseynayeen, kuma aysan jirin maskax sax ah, ma ahan sida marka ay internetka ku jiraan oo ay raadsadaan boggeyga ka dibna waqti ku lumiyaan fiirinta shaqadeyda, hadda macaamiisha ayaa ila soo xiriira.
Ilaa iyo inta la adeegsanayo fiidiyowga si aad u shakhsiyeeysid, ma ka fiican tahay inaad ku dhajiso oo aad u qorto qoraallo loogu talagalay ereyada la soo koobi karo ama miyaad u maleyneysaa in ciqaabtu ay sidoo kale tahay fikrad wanaagsan?
Mahadsanid! Faa'iidooyinka ku-qorista barta fiidiyowga si loo helo shuruudo la raadin karo weli waa ku guuleyste buuggayga. Dad aad u tiro yar ayaa adeegsada raadinta fiidiyowga - kuwaa dhexdooda, in badan oo ka mid ah ayaan waqti u helin inay si sax ah u sharxaan fiidiyaha.
Isku darida labaduba waa mid awood badan laakiin waqti yar ayey qaadataa, in kastoo. Awood u lahaanshaha inaad daabacdo Video Blog (Podcastable), IYO blog ku saabsan fiidiyow kasta wuxuu hubaal horumarin doonaa fursadahaaga in lagaa helo!
Post weyn Doug. Waxaan arkay in badan oo ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga gaarka loo leeyahay ay si khaldan u adeegsadaan shabakadaha bulshada. Uma eka oo kaliya sida spam, laakiin waxay uraysaa spam jaban. Habka ugu fiican ayaa ah inaad waqti u qaadatid inaad ku dhisto waxyaabaha ku jira internetka (balooggu waa ikhtiyaar weyn), abuuro khibrad, muuji heerkaaga wanaagsan ee xirfaddaada, kuna guuleysto natiijooyinka raadinta.
Doug tani waa boosteejo weyn. Shirkad websaydh ah oo aad u kala duwan, waxaan had iyo jeer isku dayeynaa inaan helno habab cusub oo aan ugu adeegsanno warbaahinta bulshada si aan si wax ku ool ah ugu kordhinno iibkeenna iyo booskeenna suuqgeynta. Waxaan u maleynayaa inaad ku dhufatay qodobo muhiim ah oo aad u xoog badan oo ku saabsan ku takrifalka warbaahinta bulshada, waxyaabo aan u maleynayo xitaa khubarada inay maskaxda ku hayaan.